» त्यो सुन छ चाहिँ कहाँ त !
२०७६ चैत २०, बिहिबार
त्यो सुन छ चाहिँ कहाँ त !
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १२:०२
बहुचर्चित ३३ किलो सुनकाण्डले एसएसपी, एसपी, डिएसपीसहितका दर्जनौँ प्रहरी चार–पाँच महिना जेल परे । सनम शाक्यको हत्या गरियो । ‘गोरे’ भनिने मुख्य नाइके चूडामणि उप्रेती अहिले पनि सेन्ट्रल जेलको हावा खाइरहेका छन् । तर, त्यो सुनचाहिँ छ कहाँ ?
०७५ सालको मंसिर अन्तिम साता भारतको कोलकातामा इटहरी, सुनसरीका राकेशप्रसाद र हेमकुमार शर्मा ३३ किलो सुनसहित पक्राउ परे । स्थानीय प्रहरीले उनीहरु सवार कार पनि नियन्त्रणमा लियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरी पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिले उक्त सुन नेपालबाट हराएकै हुनुपर्ने आशंका ग¥यो । समितिको दाबी थियो, गोरेले सन् २०१५ देखि पटकपटक गरी करिब ३८ क्वीन्टल, अर्थात् ३७ लाख ९९ हजार पाँच सय ५९ ग्राम सुनको अवैध कारोबार गरेको र अधिकांश सुन भारत छिराइएको । त्यही ठहरमा टेकेर लामो समयदेखि नेपाली अधिकारीहरु कोलकाता प्रहरीको सम्पर्कमा रहे । तस्करी भएको समान मेरो र तेरो भन्न पाइन्न किनभने तस्करी आफैँमा अवैध विषय हो, त्यसमाथि कसैले मेरो भन्छ भने उही नै कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।
यस्तो हैरानी हुने भएपछि नेपालको तर्फबाट सोधखोजै हुन छाडेको छ । राजश्वले सोध्दा प्रहरीले जवाफै नदिई बसेबाट अनुसन्धानकर्मीहरु यो मामिला चर्काउने पक्षमा नरहेको बुझिन्छ । बरु, ०७५ मंसिरमा समातिएका सुनसरीका राकेशप्रसाद र हेमकुमार शर्मा त्यहाँको जेलमा कैद छन् । जतिबेला यी दुई नेपाली कोलकातामा समातिएका थिए, त्यही बेला अर्को भारतीय शहर लखनउमा पनि त्यति नै परिमाणमा सुनसहित तस्कर पक्राउ परे । यसरी ३३ किलो सुन ल्याउने सूत्रधार अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन, त्यही नाममा हुने, नहुने सबथोक भइसकेको छ ।
भोकले व्यथित भुइँमान्छेहरू
विपतका बेला : बेटुंगोका कुरा, समयको बर्बादी
कोरोना कहर : समृद्धि फुलाउने रहर
सहुलियत खै त सरकार ?
भविष्यवाणिमा कोरोना र सरकार
अहिले कुन कुन देशका मान्छे फर्किए ?
सडकमा ननिस्किनु, अत्यावश्यक सामान अनलाइनबाट मगाउनु : काठमाडौं महानगर
मेडिकल माफियाले मनाए अप्रिल फुल
कहाँ गयो ग्यास ?
पुलिसका दुःख : कोरोनादेखि करिअरसम्म
गोकुल यसरी खेर गए